Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Teoria Ostwald sy ny Teoria Quinonoid | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Teoria Ostwald sy ny Teoria Quinonoid | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Home / Science & Nature / Science / Simia / Physical Simia / Inona no maha samy hafa Ostwald Teoria sy Quinonoid Tsangan-kevitra
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny teôria Ostwald sy ny teôria Quinonoid dia ny teôria Ostwald dia milaza fa ny tondro asidra-base dia asidra malemy na fototra malemy izay ampiasain'ny ampahany ihany amin'ny vahaolana, fa ny teôria Quinonoid kosa dia milaza fa ny tondro-base asidra dia miseho roa endrika tautomer izay miova amin'ny endrika iray mankany amin'ny iray hafa mba hanome fiovana loko.
Ny teôria Ostwald sy ny teôria Quinonoid dia tena zava-dehibe amin'ny simia famakafakana momba ny titration asidra-base mampiasa tondro.
2. Inona no atao hoe Ostwald Theory
3. Inona ny teoria Quinonoid
4. Teoria Ostwald vs Teoria Quinonoid amin'ny endrika Tabular
5. Famintinana - Teoria Ostwald vs Teoria Quinonoid
Inona ny teôria Ostwald?
Ny teôria Ostwald na ny lalàna momba ny fanalefahana Ostwald dia teôria amin'ny simia izay mamaritra fa ny fitondran-tenan'ny electrolyte malemy dia manaraka ny fitsipiky ny hetsiky ny besinimaro, izay tafasaraka be amin'ny famoahana tsy manam-petra. Azontsika atao ny mandinika an'io toetra mampiavaka ny electrolytes malemy io amin'ny fanandramana amin'ny alàlan'ny famaritana electrochemical.
Sary 01: Wilhelm Ostwald
Ity teôria Ostwald ity dia natolotry ny Wilhelm Ostwald tamin'ny 1891. Ity teôria ity dia miorina amin'ny teoria Arrhenius. Ity teôria ity dia milaza fa ny tondro-base acid dia asidra malemy na fototra malemy izay am-pitoerana amin'ny vahaolana ihany. Noho izany, misy endrika voarindra sy mirindra izay manana loko isan-karazany. Miankina amin'ny natioran'ny mpanelanelana, na ny endriny mifangaro na ny firaisan-kinja dia manjaka amin'ny mpampita hevitra; noho izany, ny fanovana ny toetran'ny mpanelanelana dia afaka manova ny lokon'ny mpanelanelana. Ohatra, ny phenolphthalein dia mari-pamantarana mahazatra izay asidra malemy, ary afaka manova ny lokony amin'ny loko tsy misy loko mavokely rehefa mampitombo ny pH an'ny mpanelanelana.
Ankoatr'izay, ny teôria Ostwald dia mamaritra ny antony tsy ahafahan'ny tondro iray miasa amin'ny sanda pH sasany amin'ny mpanelanelana, ohatra, ny phenolphthalein dia tsy mety rehefa manondrana asidra mahery miaraka amina fotony malemy. Izany dia satria ny teboka farany asehon'ny tondro dia tsy eo amin'ny elanelana misy ny teboka mitovy amin'ny fihetsika.
Inona ny teôria Quinonoid?
Ny teôria Quinonoid dia teôria amin'ny simia izay mamaritra tsotra fotsiny ny fomba fiovan'ny lokon'ny mari-pamantarana asidra-base arakaraka ny fiovan'ny rafitra simika. Eto izahay dia mihevitra fa misy tondro misy ny fifangaroana mandanjalanja amin'ny endrika tautomerika roa. Ireo endrika roa ireo dia antsoina hoe endrika benzenoid sy endrika quinonoid. Ny iray amin'ireto endrika ireto dia mitranga amin'ny vahaolana asidra raha ny endrika iray hafa kosa dia amin'ny vahaolana fototra. Ireo endrika roa ireo koa dia misy loko roa samy hafa izay manampy amin'ny fampisehoana ny fiovan'ny loko. Mandritra io fanovana loko io dia miova ny endriny amin'ny endrik'ilay endrika tautomer hafa ny endrika tautomer iray.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Teoria Ostwald sy ny Teoria Quinonoid?
Ny teôria Ostwald sy ny teôria Quinonoid dia tena zava-dehibe amin'ny simia famakafakana momba ny titration asidra-base mampiasa tondro. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny teôria Ostwald sy ny teôria Quinonoid dia ny teôlôjia Ostwald dia mamaritra fa ny asidra-base marie dia asidra malemy na potika malemy izay amina ampahany ihany amin'ny vahaolana, fa ny teôria Quinonoid kosa dia mamaritra fa ny tondro-base asidra dia miseho roa endrika tautomer izay miova amin'ny endrika iray mankany amin'ny iray hafa mba hanome fiovana loko.
Ity infographic manaraka ity dia mitanisa ny tsy fitovizan'ny teôria Ostwald sy ny teôria Quinonoid amin'ny endrika tabular.
Famintinana - Teoria Ostwald vs Teoria Quinonoid
Ny teôria Ostwald sy ny teôria Quinonoid dia tena zava-dehibe amin'ny simia famakafakana momba ny titration asidra-base mampiasa tondro. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny teôria Ostwald sy ny teôria Quinonoid dia ny teôlôjia Ostwald dia manoritsoritra fa ny tondro asidra-base dia asidra malemy na potika malemy izay ampiasain'ny ampahany ihany amin'ny vahaolana, fa ny teôria Quinonoid kosa dia mamaritra fa ny tondro-base asidra dia mipoitra roa endrika tautomer izay miova amin'ny endrika iray mankany amin'ny iray hafa mba hanome fiovana loko.
1. " Teoria Ostwald sy Teoria Quinonoid ." BrainKart .
1. " Wilhelm Ostwald nataon'i Nicola Perscheid " Nosoratan'i Nicola Perscheid - Gettyimages (Public Domain) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny rafitra mitokana sy ny rafitra mihidy Fahasamihafana eo amin'ny asa sy ny hafanana Fahasamihafana eo amin'ny onja elektromagnetika sy ny onja lehibe Fahasamihafana eo amin'ny QED sy QCD Fahasamihafana eo amin'ny herin'ny herinaratra tokana sy ny mety ho herinaratra mahazatra
Fahasamihafana eo amin'ny katsaka sy ny kalosy
Fahasamihafana eo amin'ny Bud sy Shoot
Fahasamihafana eo amin'ny Calcite sy ny Halite
Fahasamihafana eo amin'ny editorial sy ny taratasy ho an'ny editor
Fahasamihafana eo amin'ny elanelan'ny polyvalent sy ny ion polyatomika